Alatsinainy faha-enina mandavantaona – Trinitera Malagasy
Tsy ankasa Jenezy 4, 1-15.25/Salamo 49/
Ankasa Jakôba 1, 1-11/Salamo 118/
Md Marka 8, 11-13
Dia nanatona an’i Jesoa ny Farisianina. Mampametra-panontaniana hoe avy aiza no nipoiran’izy ireo, satria any Dalmanotà i Jesoa no niondrana niaraka tamin’ny Mpianany (raha adika ara-bakiteny Δαλμανουθά dia mety hanome hoe: tanin’ny mosarena). Tian’i Marka holazaina amintsika fa ao amintsika ao, dia misy ampahana farisianina kely ihany, miara-miondrana amin’i Jesoa fa kosa tsy mbola tapa-kevitra tanteraka amin’ny fanaraha-dia azy, ka mazava loatra, noho ny hamafin’ny fo dia miezaka ny hiady hevitra hanamarinana ny an’ny tena.
Dia raikitra ny adihevitra ka rehefa tsy manan-kavaly intsony ny Farisiana dia famantarana avy any an-danitra avy amin’i Jesoa no nangatahin’izy ireo “mba hakàna fanahy Azy”. Lazain’ny boky Deteronomy (18, 20-22) fa tsy tokony hatahorana ny Mpaminany satria raha miteny araka an’Andriamanitra izy dia ho tanteraka tokoa ny zavatra lazainy. Ny fangatahana famantarana anefa eto tsy fampiasana ny fisainana intsony fa fiandrasana fahagagana handresena lahatra. Haintsika anefa ny tantara fa ny mpimasin’i Faraona tany Ejipta aza tsy niontsona tamin’izay fahagagana nataon’i Moizy sy Arona, nahavita fahagagana ihany koa izy ireo.
Mampalahelo fa marobe koa ny kristianina mampitsoaka matanjaka an’i Jesoa, miandry fahagagana na manenjika fahagagana etsy sy eroa, ka mihevitra ny hamelomana ny “finoana” amin’izany, kanefa “finoanoam-poana” ihany izany. Sambatra kokoa, hoy i Jesoa izay tsy nahita nefa mino. Tsy mino an-jambany anefa, fa mino rehefa avy nandinika sy namakafaka fa tsy misy lalana hafa mitondra mankany amin’ny fahasambarana ankoatra izany natoron’i Jesoa.
Izany no finoana. Ny mety ho fisehoan-javatra tsy takatry ny saintsika dia tsy tokony hanakorontana ny finoana, tsy mampihena na mampitombo azy. Ny famantarana avy amin’Andriamanitra dia manampy antsika hitombo amin’ny finoana, ary tsy valim-bavaka fa araka izay sitraky ny fony fantany fa hahasoa antsika no hanehoany ny voninahiny. Tsy mila fisehoan’i Masina Maria izay tena kristianina vao hino sy hafana fo, raha toa ka nandray sy nivelona marina tokoa araka ny Evanjely. Manaiky hiseho amin’izay tsy maka fanahy Azy Andriamanitra (Fahendrena 1, 2).
Mazava ny valin-tenin’i Jesoa ho an’izay miandry famantarana raha tia azy Andriamanitra na tsia: taranaka ratsy sy mpivadika (Det 32,5). Izay tsy mahay midera ny asa ataon’Andriamanitra eo amin’ny fiainana an-davanandro fa mihevitra ny hanadala ny sain’ny olona amin’ny fahagagana atokana ho an’olom-bitsy dia mila mandini-tena manoloana ity valin-tenin’i Jesoa ity: “tsy homena famantarana ity taranaka ity”.
Ny Jody mila famantarana ary ny grika mila fahendrena (1 Kor 1, 22) hoy i Md Paoly. Fianteherana amin’ny zava-boahary ihany izany ka mety hahavoaozona hoy Jeremia (Jer 17, 5ss). Saingy ho an’izay voaantso dia afaka ny hahita ny famantarana (herin’Andriamanitra) sy ny fahendrena ao amin’ny hazofijalian’i Kristy (1Kor 1, 24). Io no famantarana tokana azon’i Kristy nomena (Lk 11, 29).
Tsy misy famantarana azontsika omena ny olona afa-tsy ny fanahafantsika an’i Kristy voafantsika araka izany. Ny fahafoizan-tenan’ny Kristianina hanasoa ny hafa maimaim-poana am-pitiavana no hany famantarana hahafahana mitory fa velona eo anivon’ny Fiangonany i Kristy ary lalam-pahasambarana no natorony izay mino azy.